C/kariin Guuled iyo Axmed Madoobe oo Xaflad soo dhaweyn ah Jigjiga loogu sameeyay – STAR FM SOMALIA
Madaxweynayaasha maamulada Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo C/kariin Xuseen Guuleed Madaxweynaha Dowlad Goboledka Galmudug ayaa xaflad soo dhaweyn ah xalay waxaa loogu sameeyay magaalada Jigjiga ee xarunta Ismaamulka Somalida dalka Itoobiya.
Xafladan waxaa soo qaban qaabiyay Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Cabdi Maxamed Cumar, iyadoo ay ka qaybgaleen masuuliyiin ka tirsan Ismaamulka.
Cabdi Maxamuud Cumar Madaxweynaha Dowlad Deegaanka Ismaamulka Somalida dalka Itoobiya ayaa Xaflada wuxuu ka sheegay inay diyaar u yihiin ka shaqeynta nabad ku wada noolaanshaha dadka wada dega xuduuda.
Wuxuu soo hadal qaaday dagaaladii ka dhacay Deeganada ku teedsan xuduuda, wuxuuna sheegay muhiim inay tahay in shacabka halkaasi wada dega ay nabad ku wada noolaadaan.
Cabdi Maxamuud Cumar, ayaa wuxuu sheegay in sidoo kale Maamulada Jubbaland iyo Galmudug looga baahan yahay kordhinta dagaalada ka dhanka ah Ururka Al Shabaab.
Madaxweynaha Galmudug C/kariin Xuseen Guuled ayaa soo dhaweeyay hadalka Madaxweynaha DDSI kaasi oo ku saabsan inay diyaar u yihiin ka shaqeynta ammaanka shacabka dega deeganada xuduuda.
Maanta ayaa lagu wadaa in labada Madaxweyne ee Galmudug iyo Ismaamulka Somalida Itoobiya ay ka wada hadlaan arimaha ku aadan dagaaladii ka dhacay deeganada xuduuda
Xoogaga Shabaab oo dagaal kula wareegay gacan ku haynta Degmada Runirgood